Ciyaarihii u dhaxeeyey Jaaliyadaha UK & Italy oo la soo gabagabeeyey & xaflad (Sawiro) – SBC
Ciyaarihii u dhaxeeyey Jaaliyadaha UK & Italy oo la soo gabagabeeyey & xaflad (Sawiro)
Xaflad balaaran oo lagu soo gabagaynayey ciyaaro saaxiibtinimo oo dhexmarey kooxo ka socda Jaaliyadaha Soomaalida ee wadamada UK & Talyaaniga ayaa lagu qabtey magaalada Firenze ee wadanka Talyaaniga waxaanka ka soo qayb galey xildhibaan Dr Cismaan Maxamuud Maxamed (Dufle) oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed isagoo la lakulmay bahda isbootiga Firenze ee wadanka Talyaaniga kulankan ayaa waxaa goob joog ka ahaa madaxa jaliyada Talyaniga Dr Cusmaan Joon iyo jaliyada UK iyo madaxa ururka mideynta isbotiga qurba joogta Soomaliyed ee UK, Axmed Max’med Xashi (Seyga Ruushka) iyo gudoomiya ku xigeenka qurba joogta Soomliyeed Cabdulqadir iwaxaana lagahadalay qiimaha isbortiga uleyahay. Sidoo kalo waxaa amaan balaran loo soo jeediyay guddoomiyaha jaliyada Soomalida ee Talyanaiga Dr Cismaan Joon oo ahaa musuulkii martigaliyay tartankani in uu ku qabsamo dalka Talyaniga garhaan magalada Firenze ee bartamaha dalka Talyaniga.
Waxaa halkasi sidoo kalo loogu hadalay qiimaha isbootiga uu leyahay iyo safarkii jaliyada UK ee ku soo gareen dalka Talyaniga iyo kulamadii ay laqateen ciyaryahanda qurbajoogta Soomaliyed ee ku nool dalka Talyaniga. “Tan ayaa waxaa ay sanadka dambe ay noqon doontaa suuqyo laga ibsado ciyaryahanada Somaalida waxaa ayna sahli doonta sharafta iyo karamada uu yeelanyo ciyaaryahanka marka laga soo badhigo shashadaha caalamka “ sidaasina waxaa yiri madax mideynta ururka qurba joogta Soomaliyed Faysal Cabdulahi oo kulankaasi goob jog ka ahaa.
Waxaa kulankasi ka soo qeyb galay sidoo kale Yuusuf SSPA media oo asagana ahaa fadhigiisa dalka UK oo halkasina ka hadalay sheegayne in uu isbortiga u yahay isdhaxgalka bulshada loona bahanyahay in la wareejiya kulamadasina martigalinteeda lana geeya dhaman gobalada dalka Talyanaiga oo idil. Wariye kas ocday Telefishinka Universal u qaabilsan dhanka ciyaaraha Cabdinasir Ismaciil (Solo) oo ahaa isaguna ka mid ahaawariyashii soo garay dalka Talyaniga mudadii tartankani ka bilaamay maagalada Ferenze.
Waana mar kii ugu hreysay ee ciyaro saxiibtinimo ee wada yeshtaan Jaaliyadaha UK iyo jaliyada Soomaalida ee dalka Talyaaniga halkasoo ay wacdro ay ku so bandhigen ciyaartoydii ka socotay UK.
Ciyaarahasi ayaa waxaa ay a haayen kuwo si weyn loogu riyaaqay dawashadeeda mudadii ay socoteen ciyaarahaasi.
Dr Xildhibaan Dufle oo ahaa masul ka socda Dawlada KMG ah ayaa asaguna amaan baalarani u soo jeediyay Seyga Ruushka oo uu ku amaanay dadaalkiisa & kaalintiisa horumarinta isportiga Soomaaliyeed gaar ahaan kan qurbaha. “Waxaynu wada ognahay in isbortiga uu yahay isdhagalka bulshada loogana bixi karo khilaafka ka jira gudaha iyo dibada ee dhilinyarada noqotey kuwa loo adeegsado burburinta dalkooda hadaba madama aynu joogno wadamo ku horamaray dhanka nabda iyo tiknolajiyada anaga maxaa inala gudboon sow ma haboona anagana in aan wax la qeybsano asageena” sidaasina waxaa yiri mid ka mida ahaa musuuliyintii ka soo qeb gasahay kulankaasi sagootinka ahaa ee lugu sogootinayay masuuliyintii ka socatay jaaliyada UK iyo ururkii mideyta qurba joogta Soomaliyed oo fadhigeeda yahay dalka UK.
Cabdulqadir isoomaarey oo ahaa asagana musuul ka socaday ururka mideynta qurba joogta Soomaliyed ayaa waxaa uu sheegay in laga dhigayo mid waregayo tarnakani isla markaana uu gaari doono dhamaan gobalada dalka Talyaniga marti kalintiisa.
“Waloow hada ay ka soo qeyb galeen sadex gobal oo ka tirsan wadan ka Talyaniga laakiin hada waxaan ku baahin doonaa dhaman gobalada dalka oo idil ee Talyaniga sidasina waxaa sheegay cabdul qadir isoomarey.
Bashiir Jiidaal Barow
BASHKA XAJI JEYYO